Fandrafetana ny fakan-tsary ho an'ny fakan-tsary amin'ny lamba famaohana sy lesona nianarana | Vahaolana OMG
Fandrafetana ny fakan-tsary ho an'ny fakan-tsary mifofofofo vatana sy lesona nianarana
Horonan-tsary na horonan-tsary (BWV), antsoina hoe fakan-tsary sy fakan-tsary mitafy vatana, na fakan-tsary azo anaovana dia feon-tsarimihetsika, horonan-tsary na famaritana tantara azo alaina. Mifanohitra amin'ireo karazana fanavaozana isan-karazany ataon'ny polisy, ny fakan-tsary mitafy vatana dia afaka manatanteraka fampiharana lalàna sy asa misokatra. Ny fakan-tsary ataon'ny polisy dia mety hanampy amin'ny fitaterana ny fitondran-tena tsy mendrika ataon'ny polisy sy ny fampiasàny fahefana, nefa azo ampiasaina koa ny horonantsary hanaraha-maso ireo olona roa izay ifaneraseran'ny polisy sy ireo avy any ivelany izay mety tsy hahatakatra fa voatifitra izy ireo.
Mandroso tsikelikely izao tontolo izao. Nanjary fiadian'ny firenena ny teknolojia. Ny teknolojia farany havaozina isan'andro. Ny fikarohana sy famoahana maoderina dia mitranga eran'izao tontolo izao rehefa mamaky izany ianao izao. Widget vaovao moderina dia ampidirina amin'ny sehatry ny fiainana rehetra izay manamora ny fiainana ho antsika. Toy izany koa ny teknolojia fakan-tsary amin'ny vatana (BWC). Ireo widgets ireo dia apetraka amin'ny vatan'ny mpiasan'ny lalàna. Izy ireo dia ampiasaina handraketana ny fihaonana izay iainan'ny manamboninahitra isan'andro ary koa ny famahanana mivantana ny iraka lehibe. Ankehitriny, ahoana ny fomba fampiharana ireo fakantsary ireo, inona ny tolo-kevitray momba izany ary inona ny lesona nianarantsika hatreto tamin'ny zavatra niainantsika. Ny lohahevitra rehetra dia voarakitra amin'ity lahatsoratra feno ity. Topazo maso, ary fenoy ny hetahetanao amin'ny fikatsahana fahafaham-po.
Fametrahana fakan-tsary miakanjo vatana
Ny fanavaozana vaovao momba ny fanaovana politika dia miteraka olana politika isan-karazany izay tokony hodinihina. Izy io dia azo ampiharina indrindra amin'ny fakan-tsary mifono vatana, izay mety misy fientanentanana be dia be raha ny filaminana, fifandraisana amin'ny tambajotra, ary ny asa anaty ao amin'ny departemanta anatiny. Rehefa mamorona programa fakan-tsary mitazona vatana ny masoivoho dia zava-dehibe ny handinihan'izy ireo amim-pitandremana ny fomba ifandraisan'ny politikany sy ny fanaon'izy ireo amin'ireto fanontaniana lehibe ireto. Ny olana momba ny politika no jerena, anisan'izany ny fiantraikan'ireto fakantsary ireto amin'ny fifandraisana manokana sy ny fifandraisana eo amin'ny fiaraha-monina, ny ahiahy napetraky ny manamboninahitra voalohany, ny fanantenana izay mamorona fakantsary amin'ny resaka fitsarana sy ny fahatokisan'ny manampahefana, ary ny fiheveram-bola omen'ny fakantsary.
Ny fampitomboana ny telefaona fakan-tsary dia mandroso amin'ny fanavaozana ny fanaraha-maso, ary ny fivoaran'ny tambajotra an-tserasera dia nanova ny fomba fahitan'ny olona filaminana, nanampy ny fahatsapana fa, araka ny nambaran'ny kaomisarian'ny polisy Charles Ramsey avy any Philadelphia, dia tsapany ho toy ny dia misintona ny olon-drehetra. ” Rehefa mandroso sy maniry ny hisian'ny fiarovana mialoha ny zava-baovao dia zava-dehibe ny hiheveran'ny fikambanana mpampihatra lalàna am-pitandremana ny fiantraikan'ny teknolojia ampiasain'izy ireo amin'ny zon'ny fiarovana ny besinimaro, indrindra fa raha mbola tsy nanome toromarika momba ireo olana ireo ny fitsarana.
Ny fakan-tsary miakan-doha dia miteraka olana momba ny fiarovana izay tsy nodinihina taloha. Mifanohitra amin'ny paikadin'ny fanaraha-maso mahazatra, ny fakantsary vita amin'ny vatana dia afaka mirakitra feo na horonan-tsary, ankoatra izany, maka sary akaiky izay manasongadina ny mety hampiasana ny fanavaozana ny tarehy. Ankoatr'izay, amin'ny ankapobeny ny fakantsary fanaraha-maso tsy mihetsika amin'ny ankapobeny, ny fakantsary manana vatana dia manome ny tompon'andraikitra ny firaketana an-tsoratra ao an-tokantranon'olona manokana sy amin'ny sary mihetsika mamelona azy mandritra ny fiantsoana serivisy.
Inona no tokony hofantarina amin'ny fampiasana cams vita amin'ny vatana?
Eo ihany koa ny ahiahy momba ny fomba mety hampiatoana sy hampiasana ny rakipeo avy amin'ny fakan-tsary mitafy vatana. Ohatra, hanana safidy ve ny olona iray haka horonantsary izay noraketina tao an-tranon'ny mpifanila trano taminy? Hikarakara tsy azo antoka ve ny firaketana? Azo eritreretina ve fa ny sarimihetsika fakantsary mitafy vatana dia mety apetraka tsy ara-dalàna amin'ny tranonkala? Rehefa mamoaka fakantsary mitafy vatana, ny biraon'ny fitakiana lalàna dia tsy maintsy manaparitaka ireo fisaintsainana fiarovana ireo miaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny mahitsy ny hetsiky ny polisy, ny antontan-taratasim-potoana marina ary ny fanangonana porofo. Midika izany fa hipetraka amin'ny safidy malina momba ny fotoana hilazana ny tompon'andraikitra hampandeha fakan-tsary, hatraiza no tokony hisy ny vaovao voarakitra, izay manakaiky ny fandraisam-peo, izay manana ny vaovao voarakitra, ary ny fomba hiatrehana ny fangatahana anatiny sy ivelany hanaovana fanambarana.
Manaiky ny firaketana
Any amin'ny firenena maromaro, ny tompon'andraikitra dia takiana amin'ny fomba manazava ny lohahevitra rehefa mirakitra feo izy ireo ary mahazo ny faneken'ny tsirairay hanao firaketana. Fantatra amin'ny hoe lalàna "faneken'ny antoko roa" izany, ary afaka miteraka fanamby amin'ny fanatanterahana programa fakantsary volo-volo. Any amin'ny fanjakana fanekena antoko roa maro, mety ho niasa tamim-pahombiazana tamin'ny andrim-panjakana mpanao lalàna ny tompon'andraikitra polisy mba hanemorana ny filàn'ny polisy fakan-tsary. Ohatra, tamin'ny volana febrily 2014 Pennsylvania dia namoaka lalàna iray hanakanana ny fepetra takian'ny roa tonta ho an'ny polisy amin'ny fampiasana fakantsary mitafy vatana.
Mandroso ny ezaka hanovana ny fitsipiky ny ankolafy roa ao amin'ny paroasy samihafa. Ny biraon'ny birao rehetra dia tsy maintsy manontany momba ny lalàm-panjakany fa hanapa-kevitra raha toa ka ilaina ny faneken'ny roa tonta
Manaiky ny manampahefana polisy sasany fa tsara ho an'ny manam-pahefana ny manoro hevitra ny olona rehefa mirakitra an-tsoratra izy ireo, na manao ahoana na manao ahoana raha toa ka tsy ilaina ara-dalàna io fanambarana io. Any Greensboro, ohatra, tohanana ireo manampahefana - dia satria raha tsy izany dia tsy takiana — hanao tatitra rehefa mirakitra an-tsoratra izy ireo. Nilaza i Boss Miller of Greensboro fa miankina amin'ny faharesen-dahatra fa ny fampahalalana misy ny fakantsary dia ahafahana manala ireo toe-javatra feno fahatezerana ary hanatsara ny fitondrantena amin'ny fivoriana rehetra.
Ireto zavatra kely ireto dia tokony ho tadidio raha mampiditra fakantsary vita amin'ny vatana ianao any amin'ny toeram-piasana na rehefa ampiharin'ity governemanta ity teknolojia amin'ny polisy na ny tafika mitam-piadiana hafa. Ankehitriny, andao hijery ny sasany amin'ireo soso-kevitra nomaninay ho anao raha manandrana mampihatra fakan-tsary mifono vatana ianao.
Torohevitra hanaparitaka ny fakan-tsary mifono vatana
Ireto misy torohevitra sasany heverintsika fa tokony ho zaraina aminao, raha toa ianao ka mieritreritra ny manaparitaka fakan-tsary vita amin'ny vatana any amin'ny toeram-piasanao.
Ny politika dia tokony ho 100% mazava izay voatendry ny mpiasa na avela hanana fakan-tsary vita amin'ny vatana ary ao anatin'izany fepetra izany.
Tokony ho eo amin'ny tratrany, lohany, solomaso, soroka, tenda na eo amin'ny sisin'ny tifitra?
Ireo tompon'andraikitra manetsika ny fakan-tsary miakanjo vatana mandritra ny asany dia tokony hojerena ny fisian'ny firaketana an-tsoratra ao amin'ny tatitra ofisialy.
Ny tompon'andraikitra dia tokony ho torohevitra amin'ny taranja rehefa voarakitra an-tsoratra izy ireo afa-tsy raha mampidi-doza, tsy mitombina na tsy azo atao ny manao izany.
Raha sanatria misy ny fikambanana manendry fakan-tsary ho an'ireo manampahefana amin'ny vanim-potoana an-tsitrapo, ny politika dia tokony hametra ny toe-javatra mazava izay tokony anaovan'ny tompon'andraikitra iray hanaovana azy.
Ireo tompon'andraikitra manao fakan-tsary mitazona vatana dia tokony aseho amin'ny fakantsary na amin'ny fandrafetana ny anton'izy ireo raha tsy miraharaha ny firaketana hetsika takian'ny politikam-birao izy ireo.
Tokony alaina ny fakantsary avy amin'ny fakantsary fitaovan'ny vatana amin'ny faran'ny fiovàna tsirairay izay nampiasain'ny fakantsary.
Amin'ny maha-politikam-pandraketana ankapobeny, ny tompon'andraikitra dia tsy maintsy takiana amin'ny fakantsary voatanisa mandritra ny fiantsoana ireo antso rehetra momba ny serivisy ary mandritra ny lalàna rehetra, ny fitakiana ny fanandramana sy ny fanaovan-javatra izay mitranga raha toa ny tompon'andraikitra.
Tsy tokony avelan'ny fakantsama hampiasa fakan-tsary mitokana irery mandritra ny fiasa.
Ny politika dia tokony hanazava ny toerana misy eo amin'ny vatan'ny olona ilana hanina.
Ny politika hentitra dia tokony hitazomana amin'ny fanodinana ny angon-drakitra, mamafa, ary fandikana ny fantsona.
Tokony hanasokajy tsara sy hanisy marika ireo horonan-tsary fakantsary vita amin'ny vatana ny tompon'andraikitra amin'ny fotoana anaovana azy ireo. Ireo horonantsary voafandrika dia tokony hapetraka ao anaty rakipeo arakaraka ny karazana tranga. Mety ve izany dia mpangalatra, vono olona, ​​na tranga mpanafika?
Ny politika mazava dia tokony hofaritana manazava hoe aiza no tokony hanaovana an-tsoratra.
Tokony havela hijery ilay rakitsoratra noraketina talohan'ny nametrahany izany teo alohan'ny fakantsary ny manampahefana, tokony hanana fotoana hamerenany ny fantsom-peo noraisina avy amin'ny ramevany izy.
Ny politika dia tokony hamaritra hoe rahoviana ny mpanara-maso no afaka mijery ny fivoaran'ny cam camélter an'ny ambany.
Miorina amin'ny zavatra niainanay no nianarantsika lesona sasantsasany momba ny fandinihana ireo masoivoho izay mitoka-monina na mametraka cams amin'ny vatana eny an-tsahan'izy ireo. Hita fa ny masoivoho dia mametraka cams amin'ny olona izay manana ny fotoana be indrindra amin'ny vahoaka, izay manana traikefa indrindra amin'ny vahoaka.
Birao vitsivitsy no mitatitra fa ny fanaraha-maso sy ny fanoratana ny vaovao voarakitra dia mety ho fomba mandreraka izay mirona amin'ny hadisoan'ny olombelona. Fikambanana iray no niatrika an'io olana io tamin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny mpamokatra fakantsary hananganana fomba informatika izay mampifandray ireo vaovao voarakitra amin'ireo firaketana ao amin'ny birao ny rafitry ny birao. Ny rafi-fakantsary sasany dia azo ampifandraisina amin'ny takelaka elektronika azon'ny tompon'andraikitra ampiasaina mba hanaraha-maso sy hametahana anarana voarakitra raha mbola eny an-tsaha.
Ny mpitantana ny polisy sy ny mpanao famotorana dia mitatitra fa tsy manana olana izy ireo ankehitriny amin'ny fampiasana mpivarotra entana any ivelany mba hanara-maso ireo vaovao voarakitra ao anaty rahona an-tserasera, raha toa ka afaka mamaha tsara ny rojom-pahefana.
Ny biraon'ny polisy dia tokony hampiasa fomba tsy mihetsika mba hiatrehana ny fametrahana fandaharana amin'ny fakan-tsary mifono vatana. Midika izany ny fitsapana ireo fakan-tsary amin'ny fanandramana mihazakazaka tetik'asa ary manao sary amin'ny manampahefana sy ny vahoaka mandritra ny fotoam-pitsapana. Manampy izany koa ny fakan-tsary amin'ny fitandremana am-pitandremana manatona ny haavon'ny tompon'andraikitra, ny mahitsy ary ny zon'ny fiainana manokana raha toa ka mitahiry ny fifandraisana misy eo amin'ny manampahefana sy olona avy ao amin'ny vondron'olona.
Fandrafetana ny fakan-tsary ho an'ny fakan-tsary mifofofofo vatana sy lesona nianarana no farany niova: Desambra 5th, 2019 by Admin